ICondo-Port of Spain-Self check-in-Gated - I-Airbnb
ICondo-Port of Spain-Self check-in-Gated
I-Condo imalunga nemizuzu eyi-2 ukuya kwi-Carenage kwindlela ephambili esentshona...kufutshane ne-Massy Stores-Glencoe, i-West Mall shopping, i-Movie Towne, "i-avenue" -Woodbrook, kunye ne-downtown Port of Spain. Ilungele ukuhlala kwe-carnival, okanye ukuba uneshishini ePort of Spain.
I-condo ikwindawo ebiyelweyo. Inamagumbi okulala amabini anomoya otyhefayo kunye namagumbi okuhlambela ayi-suite. Inendawo yokuhlala evulekileyo evulekileyo kwibhalkhoni. Ikhitshi linesitovu sombane, ifriji, i-microwave, umatshini wokuhlamba nowokomisa ukuze ungasokoli. Igumbi lokuhlala lineflethi eyi-55-inch TV. Kukho indawo yokupaka imoto eyi-1 ibe indawo yokungena kule ndawo isesangweni le-elektroniki. Le ndawo inomntu ogade iiyure eziyi-24 evekini.
I-Carenage yindawo yokuhlala ekumantla-ntshona weTrinidad. Le flethi imalunga nemizuzu eyi-2 xa usuka e-Highland Plaza (kwiivenkile ze-Massy, kwi-Subway, kwi-Pizza), eGlencoe. Nceda ujonge incwadi yam ebonisa iindawo ukuze ufumane inkcazelo engakumbi.
https://www.airbnb.com/s/guidebooks?refinement_paths =/guidebooks/Ř482 &share_channel = copy
Ndifumaneka ngomyalezo, ngoWhatsApp okanye nge-imeyile. Nceda undazise ukuba kukho into oyifunayo.